The impact of COVID-19 in Myanmar (Part 2)
Forum: In this COVID-19 crisis, what has the economic response been by the government?
Total shut down of economy was advised to curb the spread of COVID and the government took the opportunity of Myanmar new year holiday week to shut down and ordered “Stay Home” and “Social Distancing” measures.
Almost all the businesses were severely affected and the government came up with the COVID Economic Relief Plan (CERP) which has the following goals with the theme of “Overcoming as One” with the “whole-of-nation” approach.
Goal 2: Ease the Impact on the Private Sector Through Improvements to Investment, Trade and Banking Sectors
Goal 3: Ease the Impact on Labourers and Workers
Goal 6: Healthcare Systems Strengthening
The government cautioned that Myanmar has not and will not escape the economic consequences of COVID-19.
The measures are targeted at both large and small enterprises as well as the at-risk population. Regarding the goal 4, easing the impact of households, community member also came to support the needy communities initially with food items and later with cash transfer.
Forum: What has been the impact in Myanmar?
There are two words to describe the impact of COVID-19 in Myanmar. One is “unprecedented” and the other is “New Normal”.
Forum: In what ways is it unprecedented?
This was the first time in the history that famous temples in Myanmar such as Shwe Dagon pagoda, Bagan, Kyaik Htee Yo, other religious institutions and temples across the country have been closed down since April 2020. The annual traditional Myanmar new year water festival: “Thingyan” was also closed down, which were unprecedented in history of Myanmar.
All the businesses especially garment industry, hotel, travel and tours and entertainment, have been affected and there isavery profound uncertainty.
Border trades were affected resulting in tons of fresh fruit and vegetables were left spoiled during the border closure.
Forum: And what is the 'new normal'?
The cataclysm of COVID-19 interrupted all the economic and social activities in Myanmar so much so that all will have to adapt toanew situation.
New behaviors will be adopted in daily life such as wearing masks and physical distancing.
Online shopping and online study will become norms. Tourism will have to depend on local tourists. Physical distancing measures for workplaces including work from home, working in different shifts as well as housing accommodation of workers; and new regulations for wet markets and abattoirs.
There will be many more “new-normal” which will be embedded into daily activities.
မြန်မာနိုင်ငံ၏လက်ရှိ ကိုဗစ်အခြေအနေနှင့် တုန့်ပြန်ဆောင်ရွက်မှုများ (အပိုင်း ၂) (ယခင်အပတ်မှအဆက်)
မြန်မာ့ကျန်းမာရေး နှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအဖွဲ့
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ကိုဗစ်ကူးစက်ပျံ့နှံ့မှုကို တားဆီးရန်အတွက် စီးပွားရေးကို အလုံးစုံပိတ်စေရန် အကြံပြုခဲ့ပြီး နိုင်ငံတော်အစိုးရမှလည်း မြန်မာ့နှစ်သစ်ကူးရုံးပိတ်ရက်တွင်လည်း နှစ်သစ်ကူးသင်္ကြန်ပွဲများမပြုလုပ်ရန်နှင့် မိမိအိမ်တွင်သာနေရန် နှင့် လူအများနှင့် ထိတွေ့မှုကိုလည်း တတ်နိုင်သမျှလျှော့ချရန် လမ်းညွှန်ခဲ့ပါသည်။ ကိုဗစ်ကြောင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်း အားလုံးနီးပါးသည် လွန်စွာထိခိုက်ခဲ့ရပြီး အစိုးရမှ ယင်းအတွက် ကိုဗစ်−၁၉ စီးပွားရေးကုစားမှုအစီအစဥ် (COVID Economic Relief Plan – CERP) ကို ဖော်ဆောင်ခဲ့ပါသည်။ ယင်းသည် အောက်ဖော်ပြပါ ပန်းတိုင် ခုနှစ်ရပ် ပါ၀င်ပြီး “whole-of-nation” ဆိုသည့် “တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာလုပ်ဆောင်မှု” နှင့်အတူ “Overcoming as One” ဟူသည့် “အားလုံးတစ်ပေါင်းတည်းကျော်လွှားခြင်း” ဆောင်ပုဒ် တို့ ပါ၀င်ပါသည်။
ပန်းတိုင် (၁) ငွေကြေးသက်သာခွင့်များဖြင့် အသေးစား စီးပွားရေး လုပ်ငန်းကို တိုးတက်စေခြင်း၊ ပန်းတိုင် (၂) ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊ ကုန်သွယ်ရေးနှင့် ဘဏ်လုပ်ငန်းကဏ္ဍများအား တိုးတက်အောင် ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့် ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍအပေါ် သက်ရောက်မှုများကို ဖြေလျှော့ပေးခြင်း
ပန်းတိုင် (၃) အလုပ်သမားများအပေါ် သက်ရောက် မှုကို လျော့ပါးစေခြင်း
ပန်းတိုင် (၄) အိမ်ထောင်စုများအပေါ် သက်ရောက်မှုလျော့ပါးစေခြင်း
ပန်းတိုင် (၅) ဆန်းသစ် ထုတ်ကုန်များ နှင့် ပုံစံများကို တိုးမြှင့်မိတ်ဆက်ခြင်း
ပန်းတိုင် (၆) ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုစနစ်များကို အားကောင်းလာ စေခြင်း၊
ပန်းတိုင် (၇) ကိုဗစ်-၁၉ တုံ့ပြန်မှုရန်ပုံငွေ သုံးစွဲနိုင်မှု မြှင့်တင်ခြင်း (အရေးပေါ် ရန်ပုံငွေအပါအဝင်) တို့ ပါဝင်ပြီး ယင်းပန်းတိုင်ရည်မှန်းချက်များ အကောင်အထည်ဖော်မှုကိုလည်း စောင့်ကြည့်စိစစ်မှုတို့ ပါဝင်သည်။
နိုင်ငံတော် အစိုးရအနေနှင့်လည်း မြန်မာနိုင်ငံသည် ကိုဗစ်ကြောင့် ရိုက်ခတ်မှုရှိလာမည့် စီးပွားရေးအကျိုးသက်ရောက်မှုများ ကိုလည်း အလွယ်တကူ ကျော်လွှားလွတ်မြောက် နာလန်ထူနိုင်ရန် မှာ လွယ်ကူမည်မဟုတ်ကြောင်း ကိုလည်း ကောင်းစွာနားလည်ထားပါသည်။ ယင်းဆောင်ရွက်ချက်များမှာ အကြီးစား နှင့် အငယ်စား စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ နှင့် ထိရှလွယ်သော ပြည်သူလူထုများ လုပ်ငန်းများအားလုံးအပေါ် ဦးတည်ထားပါသည်။ ပန်းတိုင် (၄) တွင်လည်း အိမ်ထောင်စုများအပေါ် သက်ရောက်မှုလျော့ပါးစေခြင်း ဖြစ်သည့်အတွက် ပြည်သူလူထုများကလည်း အကူအညီလိုအပ်လျက်ရှိသော အခြေခံလူတန်းစားများကို ကနဦး လိုအပ်သော အစားအစာများ ပံ့ပိုးပေးခြင်း နှင့် နောက်ပိုင်းတွင်တိုက်ရိုက် ငွေကြေးထောက်ပံ့ပေးခြင်းများ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။
၄။ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံတွင် အကျိုးသက်ရောက်မှု
ကိုဗစ်−၁၉ ကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် အကျိုးသက်ရောက်မှုကို ဖော်ပြပါဆိုလျှင် နှစ်မျိုးရှိသည် ဟုပြောရပါမည်။ ပထမတစ်မျိုးမှာ “တစ်ခါမျှ မဖြစ်ဘူးသော” အကျိုးသက်ရောက်မှု နှင့် နောက်တစ်မျိုးမှာ “နေထိုင်မှု ပုံစံအသစ်” ဖြစ်ပါသည်။
ရွှေတိဂုံဘုရား၊ ပုဂံဘုရားများ၊ ကျိုက်ထီးရိုးဘုရား စသည့် တန်ခိုးကြီးဘုရားများအပါအ၀င် တစ်နိုင်ငံလုံးရှိ ဘာသာရေးအဖွဲ့အစည်းများ၊ ဘာသာရေးအဆောက်အအုံများကို ဧပြီလကတည်းက စ၍ ပိတ်လိုက်သည်မှာ မြန်မာ့သမိုင်းတွင် ပထမဦးဆုံး ဖြစ်ပါသည်။ နှစ်စဥ်နှစ်တိုင်းကျင်းပလေ့ရှိသော မြန်မာ့ရိုးရာအတာ သင်္ကြန်ကိုလည်း ကျင်းပပြုလုပ်ခြင်း မပြုလုပ်ရန် တားမြစ်ခဲ့ပါသည်။ ၎င်းသည်လည်း မြန်မာ့သမိုင်းတွင် ပထမဦးဆုံး ဖြစ်ပါသည်။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ အားလုံး အထူးသဖြင့် အထည်ချုပ်စက်ရုံများ၊ ဟိုတယ်များ၊ ဧည့်သည် နှင့် ခရီးသွားလုပ်ငန်းများ နှင့် ဖျော်ဖြေရေးလုပ်ငန်းများ အားလုံး ထိခိုက်ခဲ့ရပြီး ပြန်လည်နာလန်ထူနိုင်ရန်မှာ လည်း သေချာမှုမရှိပေ။ နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးများမှာ လည်း ကနဦးပိုင်းတွင်ထိခိုက်ခဲ့ရပြီး သစ်သီးဝလံများ နှင့် ဟင်းသီးဟင်းရွက်များမှာ လည်း နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေး နှင့် နယ်စပ်ဂိတ်များပိတ်သောကြောင့် တန်ချီ၍ ဆုံးရှုံးခဲ့ရပါသည်။
ရုတ်တရက်ကျရောက်လာသည့် ကပ်ရောပါ ကိုဗစ်−၁၉ သည် မြန်မာနိုင်ငံ ရှိ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ နှင့် လူ့အသိုင်းအဝိုင်းပုံမှန်လည်ပတ်မှုကို ရုတ်တရက်ရပ်တံ့စေခဲ့သည့်အတွက် ဖြစ်ပေါ်လာသည့် အခြေအနေအသစ်နှင့် လိုက်လျောညီထွေ နေထိုင်နိုင်ရန် လုပ်ဆောင်ရမည်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့ နေ့စဥ်ဘဝတွင် ပါးစပ် နှင့် နှာခေါင်းစည်းတပ်ဆင်ခြင်း နှင့် ခပ်ခွာခွာနေထိုင်ခြင်း စသည့် နေထိုင်မှုပုံစံအသစ်တို့ နှင့် လည်း အသားကျအောင် လုပ်ယူရမည်ဖြစ်သည်။ အင်တာနက်မှ ဈေးဝယ်ခြင်း များ နှင့် အင်တာနက်မှ စာသင်ယူခြင်းများမှာလည်း ပုံစံအသစ်တစ်ခုဖြစ်လာနိုင်ပါသည်။ ခရီးသွားလုပ်ငန်းများအနေနှင့် လည်း ပြည်တွင်းခရီးသွားလုပ်ငန်းများအပေါ် မှီခိုအားထားရလိမ့်မည်ဖြစ်သည်။ လုပ်ငန်းခွင်များအတွင်း ခပ်ခွာခွာနေ ပြီးလုပ်ကိုင်ရာတွင်မိမိနေအိမ်မှ အလုပ်လုပ်ခြင်း၊ လုပ်ငန်းခွင်တွင် အလုပ်လုပ်ချိန်များ ပြောင်းလဲခြင်း အပြင် ဝန်ထမ်းများအတွက် နေစရာထိုင်ခင်း များ စီစဥ်ပေးခြင်းများ၊ သားငါးဈေးများ နှင့် သားသတ်ရုံများအတွက် စည်းမျဥ်းစည်းကမ်း အသစ်ထုတ်ပြန်ခြင်းများ စသည်တို့ပါဝင်ပါသည်။ နေ့စဥ်ဘဝတွင်လည်း အခြားသော “နေထိုင်မှု ပုံစံအသစ်” မြောက်များစွာ ရှိလာဦးမည် ဖြစ်ပါသည်။
နောက်အပတ်တွင် အပိုင်း ၃ ကို ဆက်လက်ဖော်ပြပါမည်။